Inja ibulale ingane phambi kukanina - Ilanga News
Home Izindaba Inja ibulale ingane phambi kukanina
Inja ibulale ingane phambi kukanina
Umnikazi wePit Bull uthi ibidinwe ‘wukushaywa’ ngomakhelwane
KUNZIMA no-kukhuluma kowesifazane wase-Estcourt, mayelana ne-sigameko esinyantisa igazi, indodakazi yakhe eneminyaka emibili ibulawa yinja yohlobo lwe-pitbull phambi kwakhe, kodwa engenawo amandla okuyisiza yaze yashona ngo-Mgqibelo.
U-Uyenathemba Zulu (2), kuthiwa ubulawe yinja yakwaNyembe, KwaNgcolosi, eThekwini, lapho kusebenza khona unina, uNkz Nokuthula Zulu.
UNkz Zulu obelokhu ekhale njalo ngesikhathi ekhuluma ne-LANGA, uthi isigameko senzeke ngezithuba zo-15h00.
“Bengisemzini walapho ngihlala khona nobaba wakhona ose-khulile, ohamba ngesihlalo no-mfana olusa izinkomo ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko. Inja ngekabhuti wakhona omdala ongahlali ekhaya, besengiyijwayele yize ibihlale iboshiwe ngeketanga.
“Kwesinye isikhathi ibize iphakelwe yimina ukudla. Sivuke ngoMgqibelo umfana owelusa izinkomo engekho, nenja iqaqekile eke-tangweni layo. Ngifonele umnikazi wayo ngimazisa ukuthi inja iqaqekile, wathembisa ukuthi uzothumela umfana wakhe omdala ukuba azoyikhuleka.
“Ngiphume endlini ngigone indodakazi yami ngoyivula isango, ngivulela umfana obezobopha inja. Kuthe nje sengisesangweni, yaqhamuka ingasadle nkobe zamuntu, yagxumela ingane yayihlala entanyeni, kwavaleka umlomo. Ngizamile ukuyishaya ukuze idedele ingane yami, kwanhlanga zimuka nomoya, kwacaca ukuthi nami izongilimaza indlela ebinolaka ngayo.
“Ngiphume ngesango ngayocela usizo komakhelwane. Ngibuye inja ihleli eceleni kwendodakazi yami, izitika ngayo, sekugcwele namalungu omphakathi nawo abeme ngaphandle ngoba esaba ukusondela eduze kwayo. Kuze kwasiza ukuthi kuqhamuke elinye ilungu lomphakathi ebeliphethe isibhamu layidubula yafa ngoba ibingasafuni ukusuka eduze kwesidumbu sengane,” kusho uNkz Zulu.
Utshele ILANGA ukuthi ubenezinyanga ezintathu kuphela ewuqalile lo msebenzi.
ILANGA likhulume nomnikazi wenja, uMnu Scelo Nyembe, othe uneminyaka engaphezu kwewu-7 wayithenga, kuyaqala ukuthi kwenzeke into efana nale.
“Unina wengane ungitshele ukuthi ngesikhathi inja iqaqekile, ike yaphuma yaya komakhelwane ekuseni. Omakhelwane bayibhu-nyele ngamanzi abilayo ngoba nabo bebeyisaba, bezama ukuyixosha egcekeni labo.
“Ibuyele ekhaya ngabe sengithuma indodana yami ukuba iyoyikhuleka ngoba unina wengane ubesengazisile ukuthi iqaqekile futhi bengazi ukuthi ngeke akwazi ukuyikhuleka. Ngiyasola ukuthi ithukutheliswe wukubhunyelwa ngamanzi ngesikhathi iphumele komakhelwane, ukudinwa kwayo yakukhiphela enganeni ngoba unina ibisimjwayele njengoba ubeke ayiphakele nokudla,” kusho uMnu Nyembe.
Uthi yize ebazi ukuthi lezi yizinja eziyingozi, kodwa ubengakaze ayibone inodlame, kuyaqala ukuthi ilume umuntu kanje. Uthi wa-yithenga ngoba ehlushwa ngamalungu omphakathi abemntshontshela imfuyo yakhe njengoba efuye izimbuzi nezinkomo egcekeni.
Selokhu wayithenga, uthi besekwehlile ukwebiwa kwemfuyo yakhe.
“Umoya wami ukhathazeke kakhulu ngento eyehlele le ngane, kuyimanje ngisemndenini wayo ngizochazela abazali bayo ngesimo esenzekile,” kusho uMnu Nyembe.
Okhulume amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthe amaphoyisa avule idokodo lophenyo ngokushona kwengane.
Previous articleNgeke sisebenzisane ne-ANC – IFP
Next articleUzosebenzisa isipiliyoni sase-Europe uDolly